युद्दको ओझेलमा पर्यो घरपालुवा जनावरको बेदना …. - Nepal's No.1 News portal
मङ्लबार, जेष्ठ १०, २०७९ Tuesday 24th May 2022
युद्दको ओझेलमा पर्यो घरपालुवा जनावरको बेदना ….
उनि भन्छन म आफै त्यसतो अवस्थामा रहन चहान्न् । मानिसहरुले त आफ्ना जनावरहरुलाई खम्बामा समेत बाधेर छाडि गएका छन् । जनावरहरु के भई रहेकोछ भन्ने थहा नपाएर अनयोल र तनावमा परेको पाए । किन भने उनिहरुलाई थाहा छैन के -अनि किन भइ रहेको छ भन्ने ।
प्रकाशित मिति : March 27, 2022
नेपाल ज्योति चैत१३- अहिले युक्रेन- रुससँग आत्म रक्षाको लागि लडि रहदा तेस्को क्षति सबैले भोगिरहनु परेको छ । युद्दले भएको तहस नहसको पिडात छदै छ , आफ्नत सित बिछोडिनुको पिडा , देश छाडेर भाग्नुको पिडा, आफ्नो मन्छेलाइ सधा-सधा लाइ गुमाउनुको पिडाले सारा संसारको आखात रसाएको छनै । तेहि पिडा मध्य अर्को पिडा जो कसैले देखेन सकेन त्यो निक टाडले देखे ।
निक टाड एकजना त्यस्ता फोटोग्राफर हुन् जसले युक्रेन गएर विस्थापित जनावरलाई पोल्यान्डको आश्रयस्थल पुर्‍याउने काम गरि राखेका छन्।
युक्रेनका कैयौँ मानिसहरू युद्धका कारण घर छोडेर भाग्नुपर्दा आफ्ना घलपालुवा जनावरलाई परित्याग गर्नुपर्‍यो।उनै जनावरहरुको पिडालाई बुझदै निक टाड ति जनावरहरुको सहयोगमा जुटेका छन् ।
यस्ता धेरै जनावरहरु अफ्ना घरबाट विस्थापित मात्र भएका हैइन्नकी ट्रेन स्टेसन , बस स्टेसनमा पनि छाडिएका छन् किनभने बस र रेल कम्पनिले आफ्ना बस र रेल भित्र त्यसता जनावर लग्न दिदैँन्न् । तेसै कारण उनिहरु विस्थापित भएका छन् ।
मान्छेहरुले कति बध्यतामा र कति आफ्नै ज्यान जोगाउन उनिहरुलाई तेसै छाडेर हिडे । सडकमा भोक भोकै कति कराए कति मरे कति बिरामी अवस्थामा छन् । जनावरहरु लाई पनि बाच्नेे अधिकार छ । उनिहरुको पिडा बुझने यो त्रास लाग्दो अव्स्थामा कोहि थिएन । तेहि पिडा देख्न नसकेर मैले अभियान सुरुगरे उन्ले भने ।
निक र अरु स्वयंसेवीहरु पश्चिम युक्रेनमा भएका आश्रय स्थलमा पुग्ने गरेका छ्न् । उनिहरुले जनावरहरुलाई पोल्याण्ड स्थित शिविरमा पुर्याउने गरेका छ्न् । युक्रेन छाड्नु अघि जनावरहरुलाई डाक्टरले जाचँ गर्छन् अनि शिविरमा लाने गर्छन । उन्को यो काम बारे थाहा पउने सबैले राम्रो काम भन्दै तारिफ गेरेको छन् ।
मारिऊपोलमा युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरे सँगै पूर्णरुपमा जित हासिल गरेको रुसी दाबी
युक्रेनको मारिउपोलमा लडाइँ जारी, युक्रेनि सेना रसिया बिरुद्ध कठोेर संघर्षमा
बम बिस्पोट हुदा भाग्न् सफल बाहादुर ९० बर्षको आमा र उन्की छोरी…….
अमेरिकाले गर्यो युक्रेनका शरणार्थीलाई आश्रय दिने घोषणा…..
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीअस्पतालमा गएर आफ्ना घा’इते सैनिकहरू सित भेटघाट गर्दै …
युक्रेनको आकाशलाई उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नेटोसमक्ष युक्रेनका राष्ट्रपतिको पुनः आग्रह
सार्वजनिक स्थानहरूमा अनुहार पूरै ढाक्ने गरी बुर्का लगाउन अफगान महिलाहरूलाई आदेश